Lima မှာဘာကြည့်ရမလည်း ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | | Lima, ကြည့်ဖို့ဘာလဲ
တောင်အမေရိကသို့လည်ပတ်ရန်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးမြို့တော်တစ်ခုဖြစ်သည် ပီရူး၏မြို့တော်လီမာ။ ၎င်းသည်ကိုလိုနီခေတ်ကတည်းကကုန်သွယ်ရေးနှင့်စက်မှုဆိုင်ရာအချက်အချာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာနှင့်နီးကပ်သောကြောင့်သမိုင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။
Lima သည်များသောအားဖြင့်တိုင်းပြည်အတွက်တံခါးပေါက်ဖြစ်ပြီး၎င်းကိုနှစ်ရက်ကြာလည်ပတ်ရန်အကြံပြုလိုသည်။ ထို့နောက်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်ုပ်တို့သည် Cusco, Machu Pichu, Nazca နှင့်အခြားအလှကုန်များနှင့်ရင်ဆိုင်ရနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည် ဘာ Lima မှာကြည့်ရအောင်
မြို့တော် ၎င်းသည်ရီမတ်မြစ်၏တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိသည် သမုဒ္ဒရာမှ ၁၃ ကီလိုမီတာသာလျှင်အထူးသဖြင့် Callao ဆိပ်ကမ်းမှဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ Lima ဆိုတဲ့နာမည်ကကွီချူဝါကနေဆင်းသက်လာတယ် Rimac။ များစွာသောသူတို့အတွက်မြို့သည်တစ်မြို့တည်းဖြစ်သည် ပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်းနှင့်အင်ဒီးစ်ကြားရှိအိုအေစစ်။
လီမာသည်လူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံး ဖြစ်၍ ဗဟိုနှင့်မြို့ပြandရိယာကိုအယ်လ်ပိုပိုပိုဟုလူသိများသည်။ ဒီမှာ နိုင်ငံ၏လူ ဦး ရေစုစုပေါင်း၏လေးပုံတစ်ပုံသည်လူ ဦး ရေအများဆုံးဖြစ်သည် ဆိပ်ကမ်းနှင့်နီးသောကြောင့်မြို့သည်ပီရူးနိုင်ငံ၏ကျန်ကမ္ဘာ့အခြားဒေသများနှင့်ဆက်သွယ်မှုအတွက်သော့ချက်ဖြစ်လာသည်။ သို့သော်မည်သည့်ကြီးမားသောမြို့ကဲ့သို့ ညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ပတ်ပေရေတစ်ခါတစ်ရံစိတ်ဓာတ်ကျစရာလို့ပြောကြတယ်.
ပစ္စုပ္ပန်မြို့သည်စပိန်မြို့၏မူလနေရာထက်ကျော်လွန်သည်။ အနိုင်ရသူများသည်အင်ဒီးစ်မှရီမာ့ခ်ျအလျင်အမြန်ဆင်းသက်လာသောပုံသဏ္ofာန်ရှိသောအနေအထားတွင်အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြသော်လည်းယနေ့တွင်မြို့တော်သည်၎င်း၏ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိတောင်ကုန်းများနှင့်ချိုင့်ဝှမ်းများဆီသို့တိုးချဲ့လာသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ဤတွင်နှင့်ဤနေရာတွင်ကမ်းရိုးတန်းတိုက်စားမှု၊ မြေငလျင်လှုပ်ခြင်းနှင့်ချောက်ကမ်းပါးပြိုကျခြင်းများကိုကြုံတွေ့ရသောထိုမြေအနေအထားကိုခြိမ်းခြောက်နေဆဲဖြစ်သည်။
ပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်းနှင့်၎င်း၏ရေစီးကြောင်းများသည်တစ်နှစ်ပတ်လုံးအပူကိုနွေးစွာထားသော်လည်း Lima ၏ရာသီဥတုမှာအပူပိုင်းဒေသဖြစ်သည်။ ဆောင်းရာသီတွင် ၁၆ မှ ၁၈ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိနိုင်သည် နှင့် ၂၁ မှ ၂၇ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထိနွေရာသီ။ ကမ်းရိုးတန်းလေထုထုထုတ်လုပ်သည် တိမ်တွေအများကြီး ဆောင်းတွင်းနှင့်တစ် ဦး အတွက်ထူနှင့်မိုးသည်းထန်စွာ စဉ်ဆက်မပြတ်မိုးရွာရွာသို့မဟုတ် မိုးရေ, ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယေဘုယျအားဖြင့်မြို့ပြောနိုင်ပါတယ် ၎င်းသည်ဆောင်းရာသီတွင်အေးမြ။ စိုထိုင်းသော၊ နွေရာသီတွင်ပူ။ စိုစွတ်သောဖြစ်သည်။
Lima ရပ်ကွက်များစွာရှိသည်နှလုံးသည်ဖြစ်သော်လည်း Lima Old အရာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း XNUMX ရာစုမြို့ရိုးအတွင်းပူးတွဲ, XNUMX ရာစုအတွင်းစပိန်တို့ကဖွင့်ရေးဆွဲခဲ့သည်။ မြောက်ဘက်တွင်မြစ်နှင့်အရှေ့၊ တောင်ဘက်နှင့်အနောက်ဘက်လမ်းများကဝိုင်းရံထားသည်။ ဤသည်အဘယ်မှာရှိ ကိုလိုနီခေတ်အဆောက်အ ဦး များ တူသောပိုပြီးအရေးကြီးတယ် ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ ဂိုဏ်းချုပ်ဘုန်းတော်ကြီးသို့မဟုတ် Torre Tagle နန်းတော်နှင့် ၁၉ ရာစုနှင့် ၂၀ ရာစုနှစ်များအတွင်းမြေငလျင်များပြိုကျခဲ့သောကိုလိုနီအဆောက်အအုံဟောင်းများပေါ်ပေါက်လာသည့်အခြားအဆောက်အအုံများလည်းရှိသည်။
ကံမကောင်းစွာပင် ၁၉ ရာစုတွင်နံရံများဖြိုချခံခဲ့ရသော်လည်းအဓိကကျသောရင်ပြင်နှစ်ခုသည်အဓိကကျသည့်အချက်များဖြစ်သည်။ ဟုတ်လား Plaza de Armas နှင့် Plaza Bolívar။ ကံကောင်းတာကဒီနေ့ခေတ်ရှေးရိုးစွဲဝါဒနောက်တစ်ခုရှိတယ်။ အိမ်ဟောင်းတွေကိုသူတို့ရဲ့ပုံမှန်သစ်သားလသာဆောင်တွေနဲ့ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပြီးထိန်းသိမ်းထားတယ်။
ငါတို့ထဲမှာဘာတွေမြင်နိုင်မလဲ Lima ၏ရှေးခေတ်ခရိုင်? မြစ်၏မြောက်ဘက်တွင်ရစ်ချတ်နှင့်အတူကိုလိုနီဆင်ခြေဖုံးရှိသည် အိမ်ဟောင်းများ၊ ကျဉ်းမြောင်းသောလမ်းများနှင့်ချစ်စရာကောင်းသည့် Alameda de los Descalzos။ သမိုင်းဝင်စင်တာက ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နှင့် ကိုလိုနီခေတ်နှင့်ရီပတ်ဘလီကန်လသာဆောင်များနှင့်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများပါ ၀ င်သောအဆောက်အအုံများနှင့်အတူ၎င်းသည်အတိတ်ကာလပြတင်းပေါက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးပစ္စုပ္ပန်တွင်လည်းပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ဒါဟာမဖြစ်မနေလျှောက်လှမ်းရတဲ့ခရီးပါ။
သမိုင်းဝင်စင်တာတွင်လည်းရှိသည် တရုတ်ပြည်အမြဲပျော်စရာ Jirón de la Uniónလမ်းမင်းကြည့်လို့ရတယ် အစိုးရနန်းတော်မှာကိုယ်ရံတော်ပြောင်းလဲခြင်း။.. ဘုရားရှိခိုးကြောငျး ဒီမှာ Plaza Mayor မှာရှိတယ်။ ၎င်း၏ဆောက်လုပ်ရေးသည် ၁၅၃၅ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့ပြီး ၁၆၄၉ ခုနှစ်တွင်အဆုံးသတ်ခဲ့ပြီးတမန်တော်ရှင်ယောဟန်ထံအပ်နှံထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ချာ့ချ် ၁၄ ခုရှိပြီးကြီးမားသောတံခါးသုံးပေါက်ပါသောမျက်နှာစာတစ်ခုရှိပြီးမြေငလျင်လှုပ်ခြင်းများစွာမှလွတ်မြောက်ခဲ့သည်။ အတွင်း၌ရှိသောအခြားသင်္ချိုင်းများမှာရှိသည် Francisco က Pizarro.
လီမာသည်တိုင်းပြည်အတွင်းပြတိုက်များအများဆုံးအာရုံစိုက်မှုရှိသည်ဟုဆိုရမည် အမျိုးသားရှေးဟောင်းသုတေသနပြတိုက်, မနုologyဗေဒနှင့်သမိုင်း, သဘာဝသမိုင်းပြတိုက်အဆိုပါ Nation of the Museum နှင့်ရွှေပြတိုက်။ အ Larco ပြတိုက် ပြတိုက်သည်ကိုလံဘီယာခေတ်မတိုင်မီကအနုပညာပြသခြင်းအတွက်သီးသန့်ပြတိုက်ဖြစ်ပြီးရှေးဟောင်းပိရမစ်ပေါ်တွင်အလှည့်အနေဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော ၁၈ ရာစုခေတ်ကအလွန်လှပသောအိမ်တွင်လည်ပတ်သည်။ သင်ဖက်ရှင်ဓာတ်ပုံကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲဒီ့မှာရှိပါတယ် Mario Testino ပြတိုက် သို့မဟုတ် MATE, ဤကျော်ကြားသောပီရူးဖက်ရှင်ဓာတ်ပုံဆရာထံအပ်နှံသည်။
မြို့၏အရှိဆုံးလူနေအိမ်areaရိယာသည်ဗဟိုဖြစ်သည် ၂၀ ရာစုနှစ် ၃၀ အတွင်းပြောင်းလဲမှုများစွာကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ theရာမအိမ်ရာအမြောက်အများကိုမိသားစုများပိုမိုနေရာချထားရန်ခွဲခြားထားသည်။ တစ်အိမ်လျှင်နှုန်း ၅၀ နှုန်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ အတွင်းပိုင်းသန္တာကျောက်တန်းအများစုသည်ကျေးလက်ဒေသမှပြောင်းရွှေ့လာသူများကသိမ်းပိုက်ထားခြင်းခံရပြီးယနေ့ခေတ်တွင်အလွန်ဆိုးရွားသည့်သန့်ရှင်းရေးအခြေအနေများရှိသောဆင်းရဲသောဒေသများဖြစ်သည်။
မြို့၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများလည်းပြောင်းလဲပြီးအိမ်ဟောင်းများကိုရုံးများ၊ ဘဏ်များနှင့်အစိုးရဌာနချုပ်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲလိုက်သည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာပီရူးမြို့တော်သည်နံရံများ ကျော်လွန်၍ မကြီးထွားခဲ့သော်လည်းနောက်ပိုင်းတွင်ရထားနှင့်လမ်းရထားများပေါ်ထွက်လာသည့်အခါ၎င်းသည်စိတ်အားထက်သန်စွာတိုးချဲ့ခဲ့သည်။
Callao ဆိပ်ကမ်း၏အနောက်ဘက်industrialရိယာသည်စက်မှုဇုန်တစ်ခုဖြစ်လာပြီး Barranco မှ Magdalena အထိတောင်ဘက်ပင်လယ်အော်သည်နေထိုင်ရာbecameရိယာဖြစ်လာပြီး Vitarte ကျော်လွန်ပြီးအရှေ့ဘက်industryရိယာသည်စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အဆင့်နိမ့်လူတန်းစားများကြားတွင်ရှိသည်။
၂၀ ရာစုတစ်လျှောက် Lima နှင့်ကမ်းရိုးတန်းအကြားရှိလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းငယ်များသည်စုစည်းလာကြပြီး၊ La Victoria, Lince၊ San Isidro သို့မဟုတ်Breñaမြို့ဆင်ခြေဖုံးများ။ ခြံရပ်ကွက်သို့လှည့် ဆင်းရဲသားရပ်ကွက်နှင့်အရှင်ကျွန်တော်နှင့်အတူမြို့တော်များ၏မြို့ပြလူ ဦး ရေရှိသည် ဇိမ်ကျပြီးကြော့areasရိယာများနှင့်အခြားအလွန်ဆင်းရဲသောသူ။
Lima မှာဘာထပ်လုပ်နိုင် ဦး မလဲ။ အပြင် ၎င်း၏သမိုင်းဝင်စင်တာမှတဆင့်အပန်းဖြေလမ်းလျှောက် y ၎င်း၏ပြတိုက်ကိုငါသိ၏ podemos အချို့လေ့လာရေးခရီးများလုပ်ပါ။ လီမာမှသုံးနာရီခွဲကြာသည် Caral, အင်ဒီးယဉ်ကျေးမှု၏ဇာစ်မြစ်။
လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၅၀၀၀ ကျော်ကအီဂျစ်သို့မဟုတ်မက်ဆိုပိုတေးမီးယားကဲ့သို့အရေးကြီးသောယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုရှိခဲ့သည်။ Caral သည် Supe Valley ၏အလယ်တွင်တည်ရှိပြီးပင်လယ်အနီးရှိမြေသြဇာကောင်းသောမြေများဖြစ်သည်။ ပိရမစ်များ၊ မြို့ပတ်ရထားရင်ပြင်များနှင့်အုတ်အဆောက်အ ဦး များရှိသည်။
Caral ကိုတနင်္လာနေ့မှကြာသပတေးနေ့မှနံနက် ၉ နာရီမှညနေ ၄ နာရီအထိ၊ သောကြာနေ့မှတနင်္ဂနွေနံနက် ၉ နာရီမှညနေ ၆ နာရီအထိဖွင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့လည်းလုပ်နိုင်သည် Huaca Pucllana နှင့် Huaca Huallamarca တို့ကိုလေ့လာပါ, အခြားအဆောက်အ ဦ များအကြားကျန်ကြွင်းသောရပ်ကွက်အတွင်းပိရမစ်။ သူတို့ကအဖြစ်လူသိများကြသည် ဟွမ်ကတ် သူတို့သည် Miraflores နှင့် San Isidro တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်၏အလယ်တွင်ရှိသည်။ ဤအခမ်းအနားသည် Huacas များသည်ရှေးဟောင်း Lima ယဉ်ကျေးမှုကိုကိုယ်စားပြုသည်။
တစ်ချိန်ကအိန္ဒိယစျေးသို့လမ်းလျှောက်နိုင်သည်၊ စားနိုင်သည်သို့မဟုတ်လည်ပတ်ကာလက်မှုပစ္စည်းဝယ်နိုင်သည်။ အင်္ဂါနေ့မှနံနက် ၉ နာရီမှညနေ ၅ နာရီအထိည ၇း၁၀ နာရီအထိနေ့တိုင်းဖွင့်လှစ်ထားသည်။ ထိုအခါလည်းရှိပါတယ် လမ်းကြောင်းများနှင့်လမ်းလျှောက်တောင်တက်၏ရပ်ကွက် Miraflores အရမ်းဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်၊ သင်ကမ်းခြေနဲ့အားကစားကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်၊ ကမ်းခြေကအရမ်းကောင်းတယ် surfing, စက်ဘီးစီးခြင်းသို့မဟုတ် paragliding ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » မြို့ကြီးများ » Lima » Lima မှာဘာကြည့်ရမလည်း
တစ်နေ့မှာ Marseille မှာဘာကြည့်ရမလည်း